Dzidza nezvekuti tinoshandisa zvakadii Apple Watch | IPhone nhau
Ndatotaura kare muzvinyorwa zvakapfuura, izvo iko kushandiswa kwatinogona kuita Apple Watch yakabatana ne iPhone haina chekuita nePebble kana Android Wear yakabatana nefoni imwechete. Iyo Apple Watch inotibvumidza kudyidzana munzira mbiri idzi uye kuwana zvakawanda zvakawanda kubva pachigadzirwa chedu chewrist chakagadzirwa neApple pane dai chaigadzirwa nemakwikwi nezvikanganiso izvo zvinosanganisira izvi.
Chidzidzo chingoburitswa kuratidza nguva dzatinoshandisa iyo Apple Tarisa zuva nezuva uye kunyanya nemashandisirwo atinozviita nenzira yakajairika. Ivhareji nhamba yenguva iyo vashandisi veApple Watch vanofambidzana neyekushandisa iri pakati pe60 ne80 nguva pazuva. Mumamiriro mazhinji ezvinhu isu tinongo zviita kuti titarise nguva.
Zvinoenderana nekudzidza, zvishoma zvatinoita kuverenga magadzirirwo emagetsi sezvatiri kuvagamuchira. Asi kana tikaramba tichiverenga zvakabuda mushumo, tinoona kuti panzvimbo yechipiri, mushure mekuona nguva, vashandisi veApple Watch vanoshandisa chishandiso kubvunza zviziviso zvakasiyana zvatinotambira pane yedu kifaa, angave ari maemail, mameseji kubva kunyorera mameseji , sms ... kwatinoshandisa avhareji yemasekonzi 9,2.
Panzvimbo yechitatu tinowana iko kunyorera kwakagadzirirwa kuyera mhando dzakasiyana dzekurovedza muviri izvo zvatinoita isu tichishandisa iyo Apple Watch, iine 6%, pamwe nenzvimbo yekuzivisa kuitira kana tagamuchira chero ziviso yatakarasikirwa. Tevere, chishandiso chinonyanya kushandiswa ibasa, kutarisa kuti tasangana nemacalorie edu anopisa zvibodzwa, nhanho dzakafamba uye nemaawa kutsoka dzedu.
Vazhinji vashandisi kunyanya shandisa maapplication emuno izvo zvakaiswa parunhare, chete 1% yekushandisa kwechigadzirwa ndiyo inoshandiswa mune yechitatu-bato kunyorera kwatakamisa paApple Watch. Iyi 1% inomiririrawo chikamu chekushandisa chatinoita chekufona kuburikidza nefoni uye mepu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzidza nezvekuti tinoshandisa zvakadii Apple Watch
Shamwari Ignacio, ongororo yako yakanaka asi zvingave zvirinani kana ukafananidza chinongedzo ichi kana kumbobuditsa kwainobva ruzivo rwako kubva pawataura kuti "chinyorwa changoburitswa" asi haureve zita rechinyorwa. kana munyori. Kwaziso kubva kuMexico.